Dhawaajiyaan - Alerts - on B787 Sida loo barkinta?
Dhawaajiyaan - Alerts - on B787 Sida loo barkinta? sano 3 3 bilood ka hor #475
Waxaan kaliya soo dejiyey B787 Dreamliner ka Ricoooo oo ay ku rakibtay.
Si kastaba ha noqotee, markaad duuleyso, farriimaha feejignaanta ayaa si qaylo leh ugu dhawaaqaya baqshadda.
Anigu ma aanan helin meesha laga joojiyo.
Anigu ma haysto dhibaatadan la socota diyaaradaha kale. Waxay kaliya muujinayaan digniinta shaashadda (midig hoose).
Caawimaad kasta fadlan.
Tafatirka ugu dambeeya: Waxaa qoray FlyingFranz.
Dhawaajiyaan - Alerts - on B787 Sida loo barkinta? sano 3 3 bilood ka hor #476
Anigu shakhsi ahaan baan u arkaa inay yihiin kuwo waxtar leh, laakiin mid waliba oo iyaga u gaar ah, eh?
Mar labaad, waxaa jira waqtiyo aanan si sax ah u jecel "Bitching Betty" lol
ma ahan mid adag. kaliya goto faylka codka ee diyaaradaha gaarka ah, iyo feylka codka sound.cfg ee diyaaradahaas, beddelaya faylka hadda jira ee "filename = silence"
Taasi waa inay saxaan, waxaan qabaa ... lol ma i soo xigto aniga oo aan marnaba isku dayin tan ka hor.
user soo socda (s) ayaa sheegay in Waxaad ku mahadsan tahay: FlyingFranz
Dhawaajiyaan - Alerts - on B787 Sida loo barkinta? sano 3 3 bilood ka hor #477
Waad ku mahadsan tahay jawaabta degdegga ah.
Waxaan isku dayay ... Ma wanaagsana!
Ma jirto cutub "Warqadaha dhawaaqa" ee codka sound.cfg ee diyaaradahan gaarka ah.
Waad mahadsan tihiin. Waxaan isku dayi doonaa mar kale adigoo isbarbardhigaya faylka cod.coolka.
Dhawaajiyaan - Alerts - on B787 Sida loo barkinta? sano 3 3 bilood ka hor #478
Run ahaantii uma duulin 787 xaqiiqda fudud ee aan u qalmin in lagu haysto VA, fikradayda shakhsi ahaaneed. Aniga ahaan, wax walba waa lacag, iyo halka 787 laga yaabo inay u dhawyihiin isla 772LR (oo aan annagu qabanno), ma qaadi karto tiro la mid ah rakaabka sida aad arki doonto shaashadan. taas oo micnaheedu yahay wax ka yar $ $ VA.
Dhawaajiyaan - Alerts - on B787 Sida loo barkinta? sano 3 3 bilood ka hor #498
Kaliya ka raadi wav-files on simobjects / diyaaradaha / qorshaha / dhawaaqyada iyo tirtir kuwa. tusaale ahaan "callout100.wav" iwm.
Dhawaajiyaan - Alerts - on B787 Sida loo barkinta? sano 3 3 bilood ka hor #499
Waad ku mahadsan tahay jawaabta.
Si kastaba ha noqotee, ma ahan sanqadha lafteeda inay tahay wax murugo leh, laakiin xaqiiqda ah inaan laguma tukan karo diyaaraddaan gaarka ah. Dhibaatada kuma qabo diyaaraddaha kale ee ka hoos shaqeeya FSX.
Faylasha B787, waxaa jira hal lambar oo ku baaqaya in dhawaaqyadan la duubo. Waa wax aad u dhib badan sababtoo ah haddii, tusaale ahaan, soocista ay tahay mid aad u yar, xitaa heeganku wuu xitaa haddii xaddiga uu sax yahay.
Dhammaan wixii aan qaban lahaa waxay hoos u dhigtay heerka codadka ee faylasha la xiriira ee ku jira "Nooga" waraaqaha (ka 10000 hoos ilaa 6000.)
Dhawaajiyaan - Alerts - on B787 Sida loo barkinta? 1 sano 9 bilood ka hor #1211
Isticmaal [gpws] ee aircraft.cfg
Haddii aysan jirin [qaybta GPWS] kaliya hal abuur.
Qaybtani waxay ka kooban tahay faahfaahinta nidaamka digniinta dhulka.
Max_warning_height Dhererka hoose ee digniinta la shaqeynayo.
sink_rate_fpm Haddii diyaarad ka sarreyso heerkani ay ka soo baxaan digniin waa la kiciyaa.
Haddii_ku duulimaad ka sareeyo qiimeyntaas, digniin deg deg ah ayaa la shaqeynayaa.
climbout_sink_rate_fpm Haddii diyaarad bilaabanto in ay hoos u dhacdo inta lagu jiro koofurta, oo dhaafsiisan heerkani ka soo jeedo, digniin waa
flap_and_gear_sink_rate_fpm Haddii diyaaraddu soo degto, oo ay ka badato sicirka soo dejinta oo aan lahayn duulimaad ama qalab dheereysan,
digniin waa la kiciyaa.
; // Waxyaalahaas 'Diabetes' oo aan 'dejiyeyn', 'aad u hooseeya', iwm wac baaqyada
; // Waxyaalaha loo yaqaan & Thanks to Rob Barendgret
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.288